Ny Ohatra Fakan-tàhaky Ny Fanampiana Ara-Pahasalamana Nataon’i Kiobà Faha-Fidel Castro Ho An’ny Firenena Afrikàna · Global Voices teny Malagasy
Ny Ohatra Fakan-tàhaky Ny Fanampiana Ara-Pahasalamana Nataon'i Kiobà Faha-Fidel Castro Ho An'ny Firenena Afrikàna
Voadika ny 15 Desambra 2016 3:53 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, Français
Maribolana: Volana enina teo ho eo taorian'ny tolona niadiana tamin'ny otrikaretina Ebola tao Liberia sy Sierra Leone, tafaverina tany Kiobà ireo Kiobàna mpitsabo sy mpanampy mpitsabo miisa 151 . Sary: Enrique Ubieta Gómez , nahazoana alàlana
Lavitry ny kabary politika, ny fahafahan'ny isambatan'olona ary ny zon'olombelona, tao anatin'ny sehatry ny fifanohanana sy ny fanofànana, indrindra fa ny ara-pahasalamàna, no nivoatra ny fifandraisan'i Kiobà sy ireo firenena Afrikàna, nandritry ny tantara kiobàna teo ambany fitarihan'i Fidel Castro.
Tao anaty lahatsoratra iray navoakan'ny investigaction.net, nosintonina avy amin'ny sanganasan'i Salim Lamrani, mpampianatra ao amin'ny anjerimanontolon'i La Réunion, afaka vakiana ny hoe :
Ao Afrika, hatramin'ny 1963, manodidina ny 77 000 ireo kiobàna mpitsabo sy mpiaramiasa amin'ny sehatry ny fitsaboana no nanome ny tolotra avy amin'ìizy ireo tany aminà firenena 39 amin'ireo 50. Ankehitriny, maherin'ny 4.000 ireo matianina amin'ny fitsaboana, izay ny antsasany dia mpitsabo avokoa, miasa any aminà firenena 32 ao Afrika.
Ao anaty lahatsoratra iray amin'ny teny frantsay, ny ahora.cu tamin'ny 30 Novambra 2016 dia mitanisa an-Rtoa Kenia Serrano, filohan'ny Ivontoerana Kiobàna ho an'ny firahalahiana amin'ny vahoaka (ICAP) izay nampahafantatra nandritry ny Fihaonam-Paritra Afrikana ho an'ny firaisankina amin'i Kiobà, andiany faha-4, natao tao amin'ny foiben'ny Firaisambe Afrikàna (UA) ao Addis-Abéba, Etiopia, ny 21 hatramin'ny 23 Septambra, fa tanora afrikàna 40 000 no niofana tany Kiobà.
Notsindrian'i Kenia Serrano fa maherin'ny 8 000 ny Etiopiana nofanina tao amin'ilay Nosy, ary ankehitriny izy ireny dia mandray anjara amin'ny fiainana ara-toekarena sy sosialy any amin'ny fireneny, any amin'ny sehatry ny fahasalamàna, fambolena, fanatanjahantena ary ny maro hafa.
Misy 1 100 ireo fikambanam-pirahalahiana iarahana amin'i Kiobà, kanefa, manome tombondahiny manokana ny fifandraisany amin'i Afrika ilay Nosy, satria mifamatotra be amin'ny firazanana sy fahaterahan'ny firenena kiobàna izy, hoy hatrany izy nanamarika.
Tanibe manandanja i Afrika, ary ny ampahan'ny asa amin'io dinika io dia hatokana hahafantarana misimisy kokoa an'i Etiopia sy hijerena ireo sehatra vaovao azo iarahana miasa.
Notsipihan-Rtoa Kenia Serrano fa i Fidel Castro, mpitarika Kiobàna, no tena mpisava làlana tamin'ny firahalahiana teo amin'i Kiobà sy ireo firenena afrikàna, hatramin'ireo taona voalohany nisian'ny Revolisiona, ary nampiany hoe:
Nampahatsiahiviny fa ny fandefasana, 49 taona lasa izay, ny borigady voalohany ara-pitsaboana ho any Alzeria, tamin'ny 1963, no nanamarika ny fanombohan'ny fiarahana miasa iraisampirenena niaraka tamin'ireo firenena hafa.
Ankehitriny, firenena afrikàna 52 amin'ireo 54 no ananan'i Kiobà fifandraisam-piarahamiasa. Araka ireo loharano ofisialy, amin'ny sehatry ny fahasalamana no napetraka ireo tetikasa fototra, izay misy fiantraikany tena miabo amin'ny fanatsaràna ireo tondro ao amin'io tontolo io, indrindra fa noho ny fandraisana an-tànana mivantana ireo vahoaka tena mahantra any amin'ireny firenena ireny.
Tsy mijanona fotsiny amin'ny fanofànana ny asan'i Kiobà, fa nandefa olona ihany koa ilay Nosy mba hanohana ireo firenena afrikàna amin'ny sehatra maro samihafa. Nandritry ny olana goavana ara-pahasalamana nateraky ny otrikaretina Ebola tao Afrika Atsinanana, niavaka i Kiobà tamin'ny halehiben'ny isa sy ny fandraisana andraikitr'ireo mpiasan'ny fitsaboana nalefa hiady amin'ilay valanaretina. Izany mihitsy, efa niaraka tamin'ny fandefasana ireo andiany voalohany nisy mpitsabo 62 sy mpanampy 103, fanampiana mitovy lanja amin'ny fitambaran'izay nomen'ireo ambiny teto amin'izao tontolo izao no natolotr'ity nosy kely ao Karaiba tsy misy afa-tsy vahoaka 11 tapitrisa ity.
Kanefa vao ny fanombohany ihany izany, satria manoloana ny fahataràna sy ny tsy fahampian'ny fihetsehana avy amin'ireo firenena hafa, indrindra fa ireo manankarena, nandefa andiany iray hafa nahitàna manampahaizana manokana mniisa 400 indray i Kiobà.
Tena nifanandrify indrindra tamin'ny hetahetan'ireo firenena voakasik'izany io fanampiana io: Guinée, Libéria sy Sierra-Leone ary ny an-dramatoa tale jeneralin'ny Fikambanana Erantany Misahana ny Fahasalamana (OMS). Eny tokoa, Mme Margaret Chan dia nidera ny fihetsik'i Kiobà tamin'ireto teny ireto, araka ny lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny afrikanspot.com, tranonkala iray an'ireo zanaka am-pielezana afrikàna monina ao New-York:
“Isan'ny tena ilainay tokoa ny olona, ny matianina amin'ny fitsaboana. Antenaiko fa ny fanambaràn'ny fitondràna kiobàna natao androany (Zoma 2 Des) dia hanentana bebe kokoa ireo firenena mba hitondra ny fanohanany”, hoy ny fanambaràny.
Nomarihany fa ny tondrozotran'ny OMS ho fiatrehana ny Ebola, navoaka tamin'ny 28 Aogositra, dia manasongadina ny filàna fihetsehana faobe mba hanampiana ireo firenena iharan'izany.
«Ny fanolorantenan'ny fitondrana kiobàna dia maneho ny endriky ny ezaka iraisampirenena ilaina mba hanamafisana ireo hetsika firotsahana an-tsehatra ary fanamafisana ireo fahafahana / fahaizamanaon'ny firenena.
“Malaza i Kiobà amin'ny fahaizany manofana mpitsabo, mpanampy mpitsabo manana ny maha-izy azy ary amin'ny fahalalahan-tànany mitondra fanampiana ho an'ireo firenena hafa andalam-pivoarana», hoy i Dr Chan nanipika.
Nandritra ity iraka ity, nanana fanamby goavana hotanterahana ireo kiobàna manampahaizana manokana, izay tamin'ny fahafahampo mendrika azy tokoa no notsipihan'i Dr. Jorge Delgado Bustillo, tale lefitry ny Foibe fiarahana miasa ara-pahasalamana, izay tamin'izany fotoana izany, dia tomponandraikitr'ilay borigady nalefa tao Sierra Leone, tao anaty lahatsoratra iray navoakan'ny tranonkala francecuba.org, nampahatsiahivana ny fanomanana goavana natokana azo tao amin'ny Ivontoerana Tropikaly Pedro Kouri ao La Havane, tolokevitra avy amin'ireo manampahaizana manokana avy amin'ny Fikambanana Erantany misahana ny Fahasalamana (OMS) sy ny Fikambanana Iraisan'i Amerika momba ny Fahasalamana (OPS):
« Resintsika ny valanaretina iray izay azo lazaina fa tsy misy fantatra loatra ny momba azy, nosokajiana ho tena mampididoza tokoa. Ny fanazarantena amin'ny fampidirana ireo fitaovana fiarovana manokana ny tena dia nitakiana fiofanana henjana. Niaraka tamin'io fitafy fiarovana manokana io, mety very rano iray litatra isaky ny ora iray ianao, ary zavadehibe tsy maintsy natao ny nifankazàran'ny olonay tamin'ny fampiasàna azy….
Tsy vitanay hatrany ny namaritra ny aretin'ireo marary, ny vokatry ny fitiliana nitarazoka noho ny tsy fisian'ny labaoratoara. Noho ny fanohananay, foibe folo amin'io karazany io no nosokafana ary dia afaka nahazo valim-pitiliana manakaiky ny tena izy izahay. Raha momba ny Ebola, vitanay ny nahazo tao anatin'ny 12 hatramin'ny 24 ora.ny vokatry ny fitiliana. Fahombiazana ho anay rehetra.
Tsy isalasalàna fa ny fiarahana miasa amin'ny Repoblikan'i Ginea no isan'ny tranainy indrindra, noho ny fironana revolisionera niraisana vantany vao afaka nidirana tao amin'io zanatany frantsay fahiny io tamin'ny 1958. Raha ny marina, i Ginea no firenena afrikana faharoa nametraka fiarahana miasa diplaomatika tamin'ny firenen'i Fidel Castro, 55 taona lasa izay. Ny ampitson'ny nahazoan'i Ginea ny fahaleovantena, niaraka tamin'ny fialàna tampoka nataon'ireo frantsay mpiasa ambony, nandefa manampahaizana manokana marobe i Fidel Castro, indrindra fa ireo profesora hanampy ilay fanjakàna tanora.
Vao haingana kely, nandritra ny tafa nifanaovany tamin'ilay mpanao gazety, Ibrahima Sory Bangoura, ny Aprily 2014, M. Roberto Rodriguez Pena, masoivohon'i Kiobà ao Ginea, dia nanipika ny fomba fiasan'ny fiarahamiasa misy eo amin'ny firenena roa tonta any amin'ny “sehatra maro toy ny fanofànana ny fitantanana mpiasa” ary nahafahana nanofana tanora gineana maherin'ny 700.